Ividiyo yeLaryngoscope, Kit yokuBulala ngokuBulala, iLaryngoscope elahlwayo- Biotek
Sinezinto ezininzi zobunikazi, ngokujolise kwiimveliso ze-anesthesia kuqhaqho lweklinikhi.
Inkampani yethu inikwe isatifikethi solawulo lwekhwalithi ye-ISO 13485 kunye nesatifikethi se-CE kunye nokuqinisekiswa kwe-USA FDA.
Umzi-mveliso wethu omtsha ubekwe kwiPaki kaZwelonke yezoNyango kunye nePharmacy, uMmandla woPhuculo oluPhezulu lwe-Nanchang, ohlanganisa i-33,000 yeemitha zesikwere.
Ubunye kunye nokuthembeka
Ubuvulindlela kunye neNtsha
Ukuze ube nguMthengisi oPhezulu weHlabathi weeMveliso zeAnesthesia.
I-Nanchang Biotek Medical Technology Co, Ltd. Code Ikhowudi yeStock: 831448 a lishishini elinobuchwephesha obuphezulu, elikhethekileyo kwimveliso, iR & D kunye nentengiso yeemveliso zeanesthesia. Umzi-mveliso wethu omtsha ubekwe kwiPaki kaZwelonke yezoNyango kunye nePharmacy, uMmandla woPhuculo oluPhezulu lwe-Nanchang, ohlanganisa i-33,000 yeemitha zesikwere. IBiotek inolawulo oluphezulu, iR & D kunye neqela lobuchwephesha. Sinobuchwephesha bokuhlola obuphambili kunye namagumbi acocekileyo, kunye nenkampani yokufumana amava eqinileyo. Sinezinto ezininzi zobunikazi, ngokujolise kwiimveliso ze-anesthesia kuqhaqho lweklinikhi.
Intengiso Hot Hme lokucoca ulwelo kunye sy ukuphefumla ...
Esongwayo Ukuphefumla Circuit Double ukujikajika Cath ...
Impahla yoLwazi lwezoNyango i-100ml 150ml 200ml Pca An ...